Ungazenza kanjani ngezifiso izinhlelo zethu zokusebenza ze-GNU / Linux? | Kusuka kuLinux
Ungayenza kanjani ngezifiso i-GNU / Linux Operating Systems yethu?
Enza ngendlela oyifisayo i-GNU / Linux ngeGrub Customizer
Abasebenzisi abaningi be-GNU / Linux banenselelo isibkomuntu siqu Ngaphandle kokuyisebenzisela injongo ethile abayikhetha njengoHlelo Lokusebenza, ukwazi ukwenza ngokwezifiso i-Distro yakho ngangokunokwenzeka ukukhombisa ukuthi uhlelo lwe-Free Operating System lungasebenza kanjani futhi lube namandla kangakanani kuqhathaniswa nezizimele.
I-Distro ngayinye inezinhlelo zokusebenza zayo ezithile namasu okwenza ngezifiso ngendlela ephumelela kunazo zonke nephumelelayo kepha kuningi okujwayelekile futhi okutholakala ngaphakathi kwezinqolobane zazo. Kule ncwadi sizozama ukusho futhi sichaze okwaziwa kakhulu futhi okujwayeleke kakhulu kuwo wonke ama-Distros, ukuxhasa abasebenzisi beSoftware yamahhala kanye neGNU / Linux World ukufeza izinhloso zabo zokwenza ngokwezifiso nokwenza kahle ama-Distros abo.
1 Enza ngendlela oyifisayo i-GNU / Linux
1.1 I-Grub Customizer
1.2 Plymouth / DEBIAN Umphathi wePlymouth
1.3 Abaphathi Bokungena
1.4 Abaphathi bamawindi
Enza ngendlela oyifisayo i-GNU / Linux
Phakathi kwezicelo ezenziwe ngezifiso esizitholayo:
Es isikhombimsebenzisi sokuqhafaza esivumela ukuthi siphathe amamenyu wokuqalisa we-GRUB2 / BURG System ye-GNU / Linux Operating Systems. Idalwe ngu UDaniel Ritcher njengamanje senzela i Inguqulo ye-5.0.8 futhi kubekwe ngaphakathi en I-Launchpad. Lolu hlelo lokusebenza lusivumela, phakathi kwezinye izinto:
Hambisa, susa noma uqambe kabusha amarekhodi ebhuthi kwimenyu ye-GRUB,
Hlela okuqukethwe kwemenyu noma dala amarekhodi ama-boot amasha,
Qalisa ukufakwa kabusha kwe-Boot Manager ku-Master Boot Record (MBR),
Lungiselela i-Operating System ezenzakalelayo ukuze isebenze ekuqaleni,
Phatha imingcele ethile ye-kernel,
Hlela isithombe sangemuva se-GRUB nemibala yombhalo wemenyu yokuqalisa.
Izinhlelo ezilinganayo noma ezifanayo: Umphathi wokuqalisa, Umhleli we-KGRUB y I-SuperBootManager.
Plymouth / DEBIAN Umphathi wePlymouth
IPlymouth ngolunye uhlelo lokuphathwa kokuqala koHlelo Lokusebenza eligxile ekunikezeni imodi yokuqhafaza ekuqaleni koHlelo Lokusebenza, okungukuthi, ukuvumela ukuboniswa kwe-animation noma i-static, esikhundleni semodi yombhalo (ukukhonjiswa kwemiyalezo yokuqalisa) okungukuthi ekhombisa lapho ikhompyutha iqala.
Kwezinye izinhlelo ezinjengeBuntu noma iMint ifakwa ngokuzenzakalela, futhi kwezinye hhayi, njenge-DEBIAN. IPlymouth wuhlelo lokugcina futhi iDEBIAN Umphathi wePlymouth uyi-Graphical Interface yePlymouth yomdabu kuDistro MX-Linux 17.
Lolu hlelo lokusebenza lusivumela, phakathi kwezinye izinto:
Faka / Susa izihloko
Shintsha itimu yamanje ye-Splash.
Ingasetshenziswa nge-console (i-Plymouth) kanye / noma ngemvelo yokuqhafaza (i-DEBIAN Plymouth Manager) ukwenza lezi zenzo ezingenhla.
Izinhlelo ezilinganayo noma ezifanayo: Umphathi wePlymouth
Abaphathi Bokubonisa (Umphathi Wokubonisa / i-DM) abaziwa nangokuthi abaphathi bokungena, yizinhlelo zokusebenza ezinendawo yokuqhafaza ekhombisa ukuphela kwenqubo yokuqalisa ye-GNU / Linux Operating System, esikhundleni segobolondo lakhona, futhi ikakhulukazi ivumela ukungena koMsebenzisi kuSistimu.
Njengamanje i-ecosystem ye-Distros GNU / Linux inezinye izindlela ezinhle nezibanzi zabaphathi beScreen. Njengoba ukwehluka kwabo kubanzi njengokwabaphathi bamawindi nezindawo zedeskithophu.
Laba baphathi imvamisa zinikela ngezinga elithile lokwenza ngokwezifiso nokutholakala kwengqikimba futhi iningi liyalungiswa noma lenziwe libe ngcono nge-terminal noma nge-console ukuguqula amafayela abo wokumisa.
Phakathi kwezinto eziyinhloko, ezisetshenziswa kakhulu futhi ezaziwayo yilezi:
Abanye babo bane-LightDM, izinhlelo zokusebenza ezivumela ukukhohlisa kwabo. OkweLightDM kukhona "I-LightDM / lightdm-gtk-greeter-izilungiselelo ze-GTK + interface" enezingxenye zomsebenzi ezi-4 ezenza kube lula ukwenziwa kwesikrini sokwamukela nezinto zaso ezifana nokuthi:
Ukubukeka: Itimu, i-Icon, ifonti, isithombe sangemuva nesithombe somsebenzisi.
Iphaneli: AmaWigdets Esikhathi, Usuku, uLimi, nokuFinyeleleka, Iseshini Namamenyu Wamandla.
Indawo yewindi: Ukubeka iwindi lapho umsebenzisi abhalisa khona futhi angene ngaphakathi.
Abanye: Ikuvumela ukuthi ulungiselele izinhlelo zokufinyelela ezizenzakalelayo ze-Screen Manager kanye nemingcele yokulondolozwa kwe-Screen Power.
Ezinye ezinjenge-KDM noma i-SDDM ngephaneli Yezilungiselelo Ejwayelekile ye-Desktop Environment ziyalungiswa.
Iwindi lezilungiselelo zokubukeka kwesistimu esebenzayo
Abaphathi bamawindi Yilezo zinhlelo zokusebenza umsebenzi wazo ukukhombisa amafasitela wokuqhafaza wezinhlelo zokusebenza ezifakwe ku-Operating System kumsebenzisi, ukuze bakwazi ukusebenzisana kalula.
Ngakho-ke, yonke i-graphical Operating System iza ne-Window Manager okuvame ukuhlotshaniswa neMvelo yeDeskithophu (i-GNOME, i-KDE, iPlasma, i-XFCE, i-LXDE, phakathi kwabanye) ukuze wakhe imiphumela ebonakalayo kanye neWindows yeSistimu.
Phakathi kwabaphathi bamawindi abasetshenziswa kakhulu futhi abaziwayo kukhona:
Futhi phakathi kokungaziwa nokusetshenziswa okuncane kukhona:
Ngamunye unamathuluzi akhe wokumisa azovumela indawo ekhethiwe yedeskithophu ukuthi ibonwe ngendlela eyingqayizivele neyomuntu siqu, ukuze umsebenzisi ngamunye abe ne-Distro eyenziwe ngezifiso kuze kufike ekugcineni!
Izilungiselelo Zomphathi Wewindi
Ekugcineni, ukwenza ngokwezifiso i-GNU / Linux Distro yethu sisebenzise amaConkys ngokusebenzisa Umphathi weConKy noma enye idokodo, ukhetha phakathi kweDocky, AWN, Cairo Dock noma okunye okuthandayo.
Ngalokhu singenza ngokwezifiso futhi sisebenzise i-GNU / Linux Operating System yethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayenza kanjani ngezifiso i-GNU / Linux Operating Systems yethu?
I-HomeBank: uhlelo lokusebenza lwamahhala lomuntu siqu futhi oluvulekile